သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ ချစ်သူ (၂) ဦးကိုတော့ ပရိသတ်တွေ သိကြမှာပါနော်။
ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်းနှီးခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးကတော့ ခင်လွှမ်းနဲ့အတူ ပျော်စရာကောင်းပြီး ခိုင်မြဲတဲ့ ချစ်သူဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ချစ်သူ နှစ်ဦးလုံးဟာ အနုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လွှမ်းကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်လောက်တည်းက မော်ဒယ်လောကကနေ သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနောက်ပိုင်းမှာ ခင်လွှမ်းက သူမရဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားလာခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ စည်ဖြိုးနဲ့အတူ သာယာတဲ့ အချစ်အိမ်လေးကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူတို့ Relationship ဟာ ၂ နှစ် ၂ လ ၂ ပတ် နဲ့ ၂ ရက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ ခင်လွှမ်းက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်ကနေ ရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီနေ့ ချစ်သူသက်တမ်း ၂နှစ် ၂လ ၂ပတ်နဲ့ ၂ရက်မြောက်သောနေ့ 💚💛❤️ ( 20 .2. 2020 ) ဂျူးကို ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ လိုလေးသေးမရှိအောင် အစစအရာရာ ကူညီအကြံပေးဆုံးမပံ့ပိုးပြီး ချစ်သူတစ်ယောက်လိုသာမကပဲ အကိုတစ်ယောက်လို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက် ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုရေ. ဘာသာရေးလည်းလိုက်စား အကြင်နာတရားနဲ့ စိတ်ကောင်းရှိသော သူတော်ကောင်း ချစ်သူလေးကို တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားသွားပါ့မယ့်လို့ ဂျူး ကတိပေးပါတယ် ကို … အရမ်းချစ်တယ်. HAPPY ANNI ပါ ကိုရေ 😘😘😘”
ဒီ Anniversary နေ့လေးမှာတော့ ခင်လွှမ်းက ချစ်သူ ဖြစ်တဲ့ စည်ဖြိုးကို ကတိတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြင်နာတရားနဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ချစ်သူလေးကို ရထားတာ ခင်လွှမ်းအတွက်တော့ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲနော်။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း တွဲလက်တွေခိုင်မြဲပြီး အချစ်တွေဒီထက်ပိုတိုးလာနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ပရိသတ်နဲ့ ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေရတဲ့ပွဲမှာ အကြီးအကျယ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ အေးမြဖြူ
မြန်မာအိုင်ဒေါလ်ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရင်အနာရဆုံးအဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
နှစ်သစ်မှာ ဥရောပနိုင်ငံစုံခရီးဆန့်လည်ပတ်နေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ညီလေး မင်္ဂလာပွဲကို မိသားစုလိုက် တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်